» सुन पसल लुटपाट गर्न खोज्ने हतियार धारी समुह पक्राउ
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार ११:४८
हेटौंडा – अत्याधुनिक हतियार देखाएर ज्वेलर्समा लुटपाट गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिका १० त्रिबेणी चोक स्थितमा रहेको शिव पंञ्चायन ज्वेलर्समा लुटपाट गर्न खोज्ने हतियार धारी समुहलाई पक्राउ गरिएको हो ।
उनिहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय आर.आई.टी. बाट खटिएको प्रहरी टोलीले श्रावण १३ गते बिहान सुनसरी र मोरङको बिभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो । गत श्रावण १ गते दिउसो साढे १ बजे एस.एम.जि.र पेस्तोल सहित आएका उनिहरुले हतियार देखाई ज्वेलर्समा लुटपाटको असफल प्रयास गरेका थिए ।
घटनाको जानकारी पाए लगतै प्रहरीले गहन अनुसन्धान थालेको थियो । पक्राउ परेका उनिहरुको साथबाट एस.एम.जि.थान–१, ऐ.को म्याग्जिन थान–१, ऐ. को राउण्ड – ६४, कटुवा पेस्टोल थान–१, अटोमेटिक पेस्तोल थान–१, ऐ.को म्याग्जिन थान–१, ३०३ राईफलको राउण्ड थान– ४ र बि.एम.आर.लेखेको हेण्ड सेट थान–२ बरामद गरेको छ । त्यस्तै उनिहरुले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरु को २ ह २७३६ अटो टेम्पु, प्रदेश १(०२(०४४ प ५९९५, को २० प १८६, को ८ प ६५८३, को २१ प ६७०३ मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिईएको छ ।
पक्राउ परेका उनिहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट हातहतियार खरखजना तथा संगठित अपराध अन्तर्गत कानुनी प्रकृया अगाडी बढाईएको छ ।